Warka ku saabsan in PlayStation 5 si rasmi ah loo shaacin doono bisha Febraayo 2020 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Warka ku saabsan in PlayStation 5 si rasmi ah loo soo saari doono Febraayo 2020 - BGR
Microsoft iyo Sony ayaa daaha ka qaaday in horumarintooda kuxirmayaasha gurigooda xiga ay si wanaagsan u socdaan, laakiin midkoodna ma uusan sameyn wax ogeysiis ah oo xaqiijinaya magaca, qiimaha ama taariikhda sii deynta aaladdooda. Tani waxay beddeli kartaa horaanta sanadka soo socda, sidii daadad weyn 4chan ( via NeoGAF ) ayaa laga yaabaa inay kharribto qorshooyinka Sony ee dhacdooyinka waa weyn ee soo socda, oo mid ka mid ah uu ku muujin doono maamulaha muujinta ee PlayStation 5 (ama sidaas magaceeda).
Sida laga soo xigtay isha aan la garanayn, Sony waxay qaban doontaa munaasabad lagu magacaabo PlayStation Shirka 2020 the 12 ee Febraayo soo socota, inta lagu gudajiro kulanka PlayStation 5. Macluumaadkaan ayaa sida muuqata ka yimid emayl uu soo diray maamulaha suuqgeynta ugu weyn ee PlayStation. E-maylka ayaa sidoo kale lagu soo warramey in daabacayaasha xisbiga saddexaad sida Activision, Square Enix, Ubisoft iyo EA sidoo kale lagu casuumi doono inay soo bandhigaan jiilkooda xiga ee nooca aan la shaacin ee PS5.
Marka lagu daro kumbuyuutarrada cusub iyo koontada saddexaad. soo saareyaasha xafladda, dhacdada ayaa sidoo kale diiradda saari doonta kulamada soo socda ee xisbiga marka hore Dhamaadka Usa Qaybta II et Ghost of Tsushima kuwaas oo hadda bilaabaya inay bilaabaan PS4. Isha ayaa sidoo kale sheeganeysa in "tijaabooyin badan" lagu sameeyay barnaamijka "PlayStation VR 2" oo aan filan karno inaan aragno qalabka dhabta ah ee dhabta ah ee la casriyeeyay ka hor Jimicsiga 2021.
Waa in la ogaadaa in PlayStation 4 asal ahaan la soo saaray. munaasabad lamid ah tii 20 Febraayo 2013 iyo suuqii dhacay. Haddii xantaasi tahay mid sharci ah iyo in kale, waa wax la qaadan karo in Sony ay raacdo dhacdo la mid ah tii 2020, maxaa yeelay Microsoft waxay horey u xaqiijisay in Xbox-ka soo socda (code loogu magac-daray Mashruuca Scarlett) uu diyaar ku noqon doono iibsashada. kahor dhamaadka sanadka soo socda.
Waan soo qaadan doonnaa waxkasta oo ishaani qarsoon tahay 4chan ayaa lagu yidhi hadhuudh cusbo ah, laakiin sida loogu cararayo sida ugu badan shirkad kasta oo tikniyoolajiyadeed oo qorraxda hoosteeda ku jirtay sannadihii la soo dhaafay, wali waxaa jirta fursad ah in dhacdada muujinta PS5 la kharribay. Ka dib oo dhan, ka dib markaad illowdo E3 2019, astaanta PlayStation ma aysan ka dhigin cinwaannada sida ugu badan ee qarnigan badankood. Laakiin dhacdo muujineysa qalabka koongareeska qulqulaya ayaa taasi beddeli lahayd taas.
Source Source: Olly Curtis / Daabacaadda mustaqbalka / Shutterstock mustaqbalka
Taageerayaasha 'Game of Thrones' ayaa ku dhawaad ​​arkay Arya oo u dagaallamaya jidkiisa Night King - BGR